Wall Street Journal inozvisimbisa: iPhone 7 isina shanduko huru | IPhone nhau
Anenge ese makuhwa uye kudonhedza kuri kuburitswa kutaura nezve a iPhone 7 iyo ichave iine dhizaini yakada kuteverwa kune iyo yeiyo iPhone 6 / 6s. Pachave nemimwe misiyano, senge mabhandi eiyo antenna chete pamakona ekumusoro uye ezasi echishandiso kana makamera mahombe, iri iyo yeiyo Plus / Pro modhi ine lenzi mbiri, asi kukosha kucharamba kwakafanana neiyo imwe yakaunzwa kwatiri muna 2014. Nhasi uno Wall Street Journal atumira ruzivo rwunosimbisa runyerekupe rwese irworwo.
Panguva yemusangano mwedzi wapfuura nemukuru weApple, mumwe wevainjiniya veChinese akabvunza kuti nei gore rino iPhone yanga isinga sanganise hombe dhizaini dhizaini, uye mhinduro yaive yekuti «munhu mumwe kubva kumusangano uyu akayeuka kuti zvinotora nguva kuita tekinoroji iri kuuya«. Mubvunzo ndewokuti: chii ichi chichigere kuuya uye chisingakwanise kugadzirwa gore rino?
Wall Street Journal: iPhone 7 inochengeta dhizaini kuti ipe nguva kune inotevera iPhone
Runyerekupe runoti iyo iPhone 8, kana chero chaunoda kudaidza iyo iPhone ya2017, chinova chiyeuchidzo chechigumi, chichava chekutanga kushandisa OLED kuratidza. Asi chidzitiro chakakombama hachifanirwe kuve chikonzero chekunonoka kweiyo dhizaini, nekuti pane atove akati wandei pamusika uye kunyangwe iyo Apple Watch ine skrini yakakombama. Ndinofanira kubvuma kuti ndiri kuda kuziva.
Wall Street Journal masosi anosimbisawo kuti iyo iPhone 7 haizosanganise chiteshi chefoni 3.5mm. Uye chii chakaipisisa: vanoona kuti chiteshi cheMheni ndiyo ichashandiswa kuteerera mumhanzi uye kubhadharisa chishandiso, nekudaro, kunze kwekunge ivo vachivanza rumwe ruzivo, tinogona kukanganwa nezvekuteerera mimhanzi tichichaja iyo iPhone 7.
Iyo Wall Street Journal zvakare inosimbisa kuti iyo iPhone 7 Plus inoshandisa ckamera ine lenzi mbiri uye kuti mhando ichave yakakwira zvakanyanya kupfuura iyo inopihwa neiyo iPhone 6s kamera. Izvo zvakare zvinovimbisa kuti ichaswedera padhuze padhuze nehunhu hweDSLR kamera apo ichiwedzera 3D mifananidzo, imwe mhando yekufananidza. Asi zvese izvi zvichave muna 2017, saka isu tichafanirwa kuita zvatinoita zvakanyanya uye sezvisinganyanyoita: mirira kuti uone zvavakagadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo Wall Street Journal inozvisimbisa: iyo iPhone 7 haizosanganise makuru dhizaini shanduko; iyo kubva 2017, hongu
Zvinonyadzisa .. Mushure memakore maviri neyakafanana dhizaini, ivo vanoedza kukutengesera zvakafanana, ndinofunga Apple mumakore maviri .. Makwikwi anoidya, isu takaguta neIOS yavo! Zvimwe zvakafanana neyakajairika ... Inopindirana notices, ohhhh iko kuchinja kukuru! Kana gore rino .. Ipa chimwe chinhu chakafanana neicho chazvino, fara Apple! Ini zvakaitika kumakwikwi
Ita zvakanaka pa android neese ako bugs haha
Ini ndinobvumirana naJose, zvinonyadzisa uye chero tikaramba tichitenga kubva kuApple izvo zvavanotipa ivo vacharamba vachiita zvakafanana, zero innovation, mushure mekuve neese maPhones kubva ku iPhone 3G ndichaenda kumakwikwi, ini ndakaongorora mafoni eApple zvakanyanya uye chaizvo ndiri kufarira Mune iyo Huawei P9 pamwe uye Galaxy S7 Edge, yanga isiri sarudzo iri nyore asi pakupedzisira ndinofunga ndiyo yakanakisa, rimwe zuva apo Apple inogadzira zvakare, ingangodzoka, parizvino ini handizoteedzere mutambo wavo, ndiani anofarira nhare kuti ive yakatetepa, kupenga kweApple!
Kumboonekana apuro zvinoita kunge kuti makwikwi akakurova
Ami dhizaini inondisvuura kwandiri.
Ndiri kuda kamera iri nani, iOS yakakwana uye inokurumidza.
Kana chiri chokwadi kuti mafuremu mashoma uye bata pamba bhatani zvingave zvirinani
Kupfuura dhizaini. Zvingave zvirinani kamera kuti ikwanise kugona zvakapetwa bhatiri uye kugadzirisa iyo ios zvakanyanya kuti iite kuti ivhurike
Chinhu chakanaka hachisi Samsung, kana Huawei, ndiyo OnePlus 3, ndinoita gore rino dhizaini yakafanana, ndiri kuzobata iyo zvechokwadi kumirira gore rinotevera.
Vakuru vagadziri vanotsigira HomeKit neIOS 10